व्यवस्थाको प्रबन्ध – Word of Truth, Nepal
उक्त करारका शर्तहरूलाई हामी विचार गरौं। प्रस्थान १९:५-६ अनुसार यदि इस्राएलका सन्तानहरूले करारको शर्त पालना गरे भने परमेश्वरले उनीहरूलाई विशेष तरिकाले आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो – “यदि तिमीहरूले मेरा कुरा साँच्चै नै __________ र मेरो करार ___________ गर्यौ भने” (प्रस्थान १९:५)। इस्राएलीहरूले आज्ञा पालन गरे भने परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेथ्यो।
प्रस्थान १९:८ मा सारा मानिसहरूले भने, “परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुराहरू _______ __________ ___________।” पछि उनीहरूलाई मोशाले परमेश्वरका कानूनहरू दिनुभएपछि पनि के उनीहरूले यही कुरा भने (प्रस्थान २४:३)? __________। प्रस्थान २४:७ मा ती मानिसहरूले भने, “परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुरा हामी ___________ र _____________ हुनेछौं।”
“परमप्रभु, हामीले तपाईंका आज्ञाहरू पालन गर्न सक्दैनौं। हाम्रा हृदयहरू दुष्ट छन्, विद्रोही छन् र पापी छन्। हामी आफैमा आज्ञापालन गर्ने शक्ति छैन। हामीले मन्ना बटुल्ने सम्बन्धी दुइटा सरल नियमहरू पनि पालन गर्न सकेनौं। तपाईंले हामीलाई सहायता गर्नुभएन भने र हामीलाई क्षमता दिनुभएन भने हामी निश्चय विफल हुनेछौं। प्रभु हामी सक्दैनौं। तपाईंले हामीलाई सहायता गर्नुपर्छ!”
ख्रीष्टको सहायता र शक्तिबिना एउटा विश्वासी जनले कत्तिको गर्न सक्छ (यूहन्ना १५:५)? ____________________। इस्राएलका सन्तानहरूले यसरी भन्नुपर्नेथियो, “परमप्रभुबिना उहाँले आज्ञा गर्नुभएका यी कुनै पनि कुराहरू हामीले गर्न सक्दैनौं। उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो र हामीलाई शक्ति दिनुभयो र हाम्रो हृदयहरूमा काम गर्नुभयो भने मात्रै हामी सो गर्न सक्नेछौं।” पढ्नुहोस, मर्कूस १४:२९-३१ र मर्कूस १४:६६-७२। पत्रुससित परमेश्वर-केन्द्रित विश्वास थियो कि आत्म-केन्द्रित विश्वास थियो? _____________________________।
परमेश्वरले केही नियमहरू सीनै पर्वतभन्दा अगाडि पनि दिनुभएको थियो तर सीनै पर्वतमा भने परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई नियमहरूको एउटा विशेष संगालो नै दिनुभयो जसलाई परमेश्वरले “मेरो करार” (प्रस्थान १९:५) भन्ने संज्ञा दिनुभयो। यस संगालोमा दस आज्ञा पनि पर्थ्यो साथै जीवनका सबै पक्षहरूलाई समेट्ने थुप्रै अरू नियम-विनियमहरू पनि यसमा समावेश थिए।
हामीले यो याद राख्‍नुपर्छ, इस्राएलका सन्तानहरू व्यवस्थालाई आंशिकरूपमा मात्र नभएर पूर्ण रूपमा पालन गर्न जिम्मेवार थिए। व्यवस्था ६:२ मा “सबै” भन्ने शब्द छ? ________। व्यवस्था २८:१ र १५ मा “सबै” भन्ने शब्द छ? परमेश्वरले इस्राएलका सन्तानहरूलाई व्यवस्था दिनुहुँदा उनीहरूले भने, “परमप्रभुले भन्नुभएका ________ कुराहरू हामी पालन गर्नेछौं” (प्रस्थान १९:८ र प्रस्थान २४:३,७)। परमेश्वर आंशिक आज्ञापालन (कुनै आज्ञा पालन गर्ने तर कुनै पालन नगर्ने) चाहनुहुन्नथ्यो तर उहाँ पूर्ण आज्ञापालन (सबै पालन गर्ने) चाहनुहुन्थ्यो। के परमेश्वरले आजका विश्वासीहरूबाट पनि पूर्ण आज्ञापालनको माग गर्नुहुन्छ (मत्ती २८:२०)? ________________।
इस्राएल जातिले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गरे कि गरेनन्? इस्राएलीहरूले भनेका थिए, “परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुराहरू हामी पालन गर्नेछौं!” उनीहरूले साँच्ची नै यसै गरे कि गरेनन्? यर्मिया ३१:३२ मा हामी सिक्छौं कि उनीहरूले यस करारलाई भङ्ग गरे! उनीहरू व्यवस्था पालन गर्न विफल भए।
इस्राएलका सन्तानहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई कति छिट्टै भङ्ग गरे! परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न उनीहरूले कुनै समय खेर फालेनन्। उनीहरूले दस आज्ञालाई मोशा सीनै पर्वतबाट झर्न नपाउँदै भङ्ग गरे। यस दुःखद् घटना प्रस्थान ३२:१-६ मा उल्लेख छ (प्रस्थान २०:३-५ सित तुलना गर्नुहोस्)। त्यस जघन्य पाप पश्चात् परमेश्वरले भन्नुभयो, “तिनीहरूलाई जुन मार्गमा हिँड्ने आज्ञा मैले दिएको थिएँ, त्यसबाट तिनीहरू यति ________ अर्कोतिर लागेका छन्” (प्रस्थान ३२:८)।
न्यायकर्ताको समयहरूमा इस्राएलका सन्तानहरूले परमेश्वरको व्यवस्थाको पालना गरेनन्, तर “ती दिनमा इस्राएलमा कुनै राजा थिएन, र हरेक मानिसले _________ ________मा जे ठीक लाग्यो त्यही गर्दथ्यो” (न्यायकर्ता २१:२५)। राजाहरूको प्रायःजसो समयहरूमा इस्राएलीहरूले अरू देवताहरू (मूर्तिहरू) को सेवा गरे। उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरे। “परमप्रभुले तिनीहरूलाई ‘तिमीहरूले यस्तो गर्नु _________’ भन्नुभए तापनि तिनीहरूले _______________को पूजा गरे” (२ राजा १७:१२)। २ राजा १७:७-१९ पढेर इस्राएलको विफलता देख्न सकिन्छ (विशेष गरी पद १५ र १९)।
धेरै हिसाबमा हामी इस्राएलका सन्तानहरू जस्तै छौं। हाम्रा हृदयहरू पापी र विद्रोही छन्। हामीमा परमेश्वरको वचनलाई र परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई पालन नगर्ने झुकाव छ। विश्वासी जनहरूको सवालमा पनि यो कुरा साँचो छ। परमेश्वरको सहायता र शक्तिबिना हामी आज्ञाकारी जीवन बिताउन सक्ने नै थिएनौं। हामीलाई इच्छुक बनाउन र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न र उहाँको शुभइच्छा पूरा गर्न हामीलाई क्षमता दिनलाई हामीभित्र काम गर्नुहुने को हुनुहुन्छ (फिलिप्पी २:१३)? ___________। उहाँबिना हामी केवल विफल मात्र हुन सक्छौं तर उहाँद्वारा हामी सफल नभई छाड्दैनौं! “मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टद्वारा म सबै कुराहरू गर्न सक्छु (फिलिप्पी ४:१३)।”
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 16:31:372020-04-28 14:32:54व्यवस्थाको प्रबन्ध
प्रतिज्ञाको प्रबन्धव्यवस्था र आज्ञाहरू